I-DOOGEE X5 kunye nokwahluka kwayo: izimvo, iimpawu kunye namaxabiso | I-Androidsis
I-DOOGEE X5, sikubonisa zonke iinkcukacha zeemodeli ezahlukeneyo
IDOGOGE Yenza i-niche kwimarike ngokubonisa iitheminali ezipheleleyo ezibalaseleyo ekunikezeleni ngeetheminali ngamaxabiso okudiliza. I-brand apho siye sakwazi ukuvavanya ezinye zezisombululo zayo kwaye basishiyele iimvakalelo ezilungileyo kakhulu. Namhlanje ndifuna ukuthetha nawe nge-DOOGEE X5.
Okanye endaweni yoko, kwiimodeli ezahlukeneyo ezikhoyo zolu hlobo: I-DOOGEE X5, DOOGEE X5 Pro kunye ne-DOOGEE X5 Max Pro, uthotho lweetheminali zamanqanaba okungena angadluli kwi-100 euro. Ngaphandle kokuqhubeka, ndikushiya nayo yonke Iimpawu, ixabiso kunye nezimvo ze-DOOGEE X5 kunye nokwahluka kwayo.
1 I-DOOGEE X5, esi sisiphelo esilula somgca we-X5 womenzi waseAsia
1.1 Iimpawu zobugcisa
2 I-DOOGEE X5 Pro, i-RAM ngakumbi kunye neprosesa ebhetele yokuhambisa uninzi lwemidlalo
2.1 Iimpawu zobugcisa ze-DOOGEE X5 Pro
3 I-DOOGEE X5 Max, ifowuni enokuzimela okukhulu kunye nokufunda ngeminwe
3.1 Iimpawu zobugcisa ze-DOOGEE X5 Max
4 I-DOOGEE X5 MAX Pro, le yeyona nguqulo ineevithamini yomgca we-DOOGEE X5
4.1 Iimpawu zobugcisa ze-DOOGEE X5 Max Pro
I-DOOGEE X5, esi sisiphelo esilula somgca we-X5 womenzi waseAsia
Ndiza kuqala ngokuthetha nge-DOOGEE X5, the Inguqulelo engaphezulu kwe-decaffeine yelayini ye-X5 yesigebenga samaTshayina. Sithetha ngefowuni efanelekileyo ukuqala kwindalo yonke ye-Android okanye ukukukhawulezisa ukuba ufuna ifowuni enexabiso eliphantsi nelisebenzayo. Ukuthathela ingqalelo oko Ungayithenga kwiAmazon nge-euro ezingama-57.99 kuphelaUya kufumana iinketho ezimbalwa ngelo xabiso.
Ngokuphathelele kuyilo, xa sifumana enye yee-smartphones ezingabizi kakhulu nge-Android asinakulindela ukuba ifowuni ibe nokugqibezela okuhle okanye isikrini esigobileyo. Njengoko kulindelwe, ifowuni injalo yenziwe nge-polycarbonate kwaye inoyilo olungabonakaliyo, kodwa olusebenzayo.
I-DOOGEE X5 inoyilo oluxande ngokupheleleyo, nangona i-curvature encinci kwiikona zayo yenza ukuba ifowuni izive ikhululekile esandleni. Kananjalo ngamanyathelo e 143 x 72.2 x 8.8 mm ifowuni inokusetyenziswa kamnandi ngesandla esinye.
Ubunzima bayo buyelele, I-155 gram Ndiyifumana igqithisile kwifowuni engenawo umzimba owenziwe ngealuminium, nangona ingazikhathazi emva kokusebenzisa ixesha elide. Omabini amaqhosha amandla kunye nezitshixo zolawulo lwevolumu zikwicala lasekunene le-DOOGEE X5. Ngokubanzi, amaqhosha abonelela ngohambo oluchanekileyo kunye nokumelana ngokwaneleyo noxinzelelo, ke akukho nto yokugxeka kulo mbandela.
Ukugqiba icandelo loyilo, yitsho loo nto I-DOOGEE X5 ngaphezulu kokufezekisa umsebenzi wayo Kwaye sithathela ingqalelo ixabiso layo, asinakho ukubuza ngaphezulu kumenzi.
Isikrini: I-5-intshi IPS enesisombululo se-HD (1.280 x 720 pixels)
Inkqubo: Isiseko esisisiseko seMTK6580 1.3 GHz
GPU: IMali 400
I-RAM: 1 GB
Inkumbulo yangaphakathi: I-8 GB, iyandiswa yi-microSD ukuya kuthi ga kwi-32 GB
Ikhamera esemva: 5 MP ngefleshi
Ukuxhuma: I-WiFi 802.11 b / g / n, GPS, A-GPS, iBluetooth 4.0, 3G (GSM 850/900/1800/1900 MHz; WCDMA 850/1900/2100 MHz)
Inkqubo yokusebenza: I-Android 5.1 Lollipop
SIM ezimbini: Ewe (2 x microSIM)
Ibhetri: 2.200 mah
Ubungakanani: X x 143 72.2 8.8 mm
Ubunzima: I-155 gram
Ngokobuchwephesha sithetha ngefowuni encinci, kodwa eya kuthi ihlangane neemfuno ezisisiseko sawo nawuphi na umsebenzisi. Ngele ndlela singakwazi ukusefa kwi-intanethi, sisebenzise iinethiwekhi zentlalo ezinje nge-Facebook okanye iinkonzo zohlobo lwe-WhatsApp.
Inkqubo yakho I-MediaTek MT6580 Kunye neyakhe IMali 400 GPU izakuvumela imidlalo ehambayo engadingi mfanekiso mkhulu, kodwa nge Imemori ye-1 GB ye-RAM sinokulibala malunga nemidlalo yokusika.
Yitsho ukuba i Iscreen se-5-intshi ngesisombululo se-HD inika imibala eqaqambileyo nebukhali, lelinye lawona macandelo anomdla kule fowuni ibiza kakhulu. Iikhamera zayo, kumndilili wento ekulindeleke ukuba zingene kwiitheminali zenqanaba lokungena, zivumela ukuthatha iifoto ezifanelekileyo kakhulu kwindawo ezikhanyiswe kakuhle. Ewe, ebusuku ulibale ngokuthatha iifoto ezisemgangathweni, nangona isibane se-LED kwikhamera esemva siyakukhupha ngaphandle kwengxaki enye.
Olunye amandla amakhulu esi sigxina sikulo Isandisi-lizwi, que Kuyamangalisa umgangatho ophakamileyo wesandi osinikezelayo ngaphandle kwexabiso elihlengahlengisiweyo lesiphelo. Okokugqibela, eyakho I-2.200 mAh ibhetri ngaphezulu kokwaneleyo ukuxhasa ubunzima obupheleleyo bezixhobo zefowuni, ukubonelela ngokuzimela kwemini epheleleyo. Nangona kuya kufuneka uhlawule ifowuni yonke imihla ebusuku.
Ngokubanzi ifowuni eyenza lo msebenzi Kwaye ngexabiso elikwiAmazon yenye yezona ndlela zibalulekileyo onokuzijonga ukuba ufuna ifowuni ye-Android ngexabiso eliphantsi ngangokunokwenzeka. Inkulu kodwa yesiphelo? Inkqubo ye- I-DOOGEE X5 ayinayo i-4G yokunxibelelana.
I-DOOGEE X5 Pro, i-RAM ngakumbi kunye neprosesa ebhetele yokuhambisa uninzi lwemidlalo
Ifowuni yesibini kuluhlu lwethu yi-DOOGEE X5 Pro, inguqulelo epheleleyo ngakumbi kunangaphambili. Umahluko phakathi kwe I-DOOGEE X5 Pro kunye ne-DOOGEE X5, njengoko uza kubona kamva, iyamangalisa kwaye ucinga ukuba unako yithenge nge-amazon cofa apha mnikelo we 72.90 euro, Kufanelekile ukuhlawula ezo euro ezingama-20 zomahluko ukufumana i-X5 Pro. Ngaphandle kwamathandabuzo.
Ngokwendlela yoyilo, sifumana ifowuni elula engabonakali xa ithelekiswa nabantu abakhuphisana nabo. Into esengqiqweni ukuba sithathela ingqalelo uluhlu lwamaxabiso ahamba kule fowuni.Isiphelo senziwe nge-polycarbonate kwaye sime ngaphandle ngenxa yokuba sinaso ubukhulu kuthintelwe kakhulu: Ubukhulu: 143 x 72.2 x 8.8 mm, ukuze ifowuni isetyenziswe ngokugqibeleleyo esandleni.
Ewe kunjalo, njengeX5, i Doogee I-X5 Pro inobunzima obumangalisayo I-178 gram, nangona ndiyithanda Wowu iifowuni zinobunzima, yinkcukacha ekufuneka ithathelwe ingqalelo . Kokunye, ukutsho ukuba i-DOOGEE X5 Pro yi Isiphelo sendlela esivakalelwa kukuba sonwabe kakhulu esandleni. Amaqhosha abekwe kwicala lasekunene lefowuni, anokuchukumisa okumnandi kunye nohambo oluhle.
Iimpawu zobugcisa ze-DOOGEE X5 Pro
Inkqubo: Isiseko seMTK6735M isikwere 1.3 GHz
GPU: I-ARM Mali T - 720MP2
Inkumbulo yangaphakathi: I-16 GB, iyandiswa yi-microSD
Ukuxhuma: I-WiFi 802.11 b / g / n, GPS, A-GPS, iBluetooth 4.0, 4G, NFC, 3G (GSM 850/900/1800/1900 MHz; WCDMA 850/1900/2100 MHz)
Ibhetri: 2.400 mah
Las Umahluko phakathi kwe-DOOGEE X5 kunye ne-DOOGEE X5 Pro zibalasele ngakumbi kule nkalo. Ukuqala, sifumana iprosesa enamandla ngakumbi IMediaTek MT 6735M Ngoyilo lwama-64-bit, kunye a IMali T720 MP2 GPU y I-2 GB ye-RAM.
Ngale miba ngoku sinokudlala imidlalo yokusika, nangona ezo zifuna umthwalo omkhulu wemizobo zinokucotha. Enye inkcukacha ephawulekayo eyahlula i-DOOGEE X5 kwi-Pro inguqu iza nokugcinwa kwangaphakathi, kuba le mibini iphindwe kabini amandla Inkumbulo eyi-16 GB.
Kwicandelo lekhamera ndingakuxelela kancinci ukusukela i-DOOGEE X5 Pro inyusa ifayile ye- Ikhamera efanayo ye-5-megapixel ngasemva, kunye ne-2-megapixel sensor yangaphambili kunohlobo oluqhelekileyo. Zombini iikhamera kwaye zingena kwii-megapixels ezi-8 ukuya kwezi-5 ngokwahlukeneyo, ukuze zikwazi ukukhupha ngaphezulu kwengxaki enye ngokuthatha iifoto ezichanekileyo kwindawo ezikhanyiswe kakuhle.
Ibhetri ayiveli kukhuphiswano lwayo. Nge-2.400 mAh ithembisa ukuzimela kosuku olupheleleyo, nangona kuya kufuneka ubize ifowuni rhoqo ebusuku. Kwaye uqaphele I-DOOGEE X5 Pro inayo unxibelelwano lwe-4G, Iinkcukacha ekufuneka uzigcine engqondweni.
Ifowuni ekhuphisana nayo iya kuba nexabiso elijikeleze i-euro ezingama-150, ke le fowuni lukhetho olunomdla kwaye ndicebisa ngaphezulu kweqhelekileyo i-DOOGEE X5.
I-DOOGEE X5 Max, ifowuni enokuzimela okukhulu kunye nokufunda ngeminwe
Apha singena kumgca omtsha ngaphakathi kuluhlu lweX5. Sithetha ngeemodeli zikaMax ezime ngaphandle ngokuba nefayile ye- I-4.000 mAh ibhetri kunye nokufundwa kweminwe. Kule meko sinokuthenga i-DOOGEE X5 Max kwiAmazon cofa apha Ngexabiso lama-euro angama-64.99, kodwa sele ndikuxelele Umahluko wamaxabiso, i-DOOGEE X5 Max Pro ingaphezulu kwexabiso layo.
El uyilo luqheleke kakhulu, ngefowuni eyenziwe ngeplastikhi kwaye inamanyathelo ayi-141.5 x 69.7 x 10.4mm. Bekuya kulindeleka ukuba ngebhetri enkulu kangako, ifowuni iya kuba yomelele kunezinye iimodeli. Iigram zayo ezili-168 zobunzima zenza ukuba i-terminal ibe sisixhobo esomeleleyo, nangona inokusetyenziswa ngokugqibeleleyo ngesandla esinye ngaphandle kweengxaki ezinkulu.
Iimpawu zobugcisa ze-DOOGEE X5 Max
Ikhamera esemva: Ilungu le-5 MP lithunyelwe kwii-megapixels ezi-8 ngeflash
Ikhamera yangaphambili: I-2 MP itolikwe kwii-megapixels ezi-5
Ukuxhuma: I-WiFi 802.11 b / g / n, GPS, A-GPS, iBluetooth 4.0 3G (GSM 850/900/1800/1900 MHz; WCDMA 850/1900/2100 MHz)
Ibhetri: 4.000 mah
Ubungakanani: 141.5 x 69.7 x 10.4mm
Ngokobuchwephesha, ngaphandle kwebhetri kunye nenyani yokuba inenzwa yeminwe, i-DOOGEE X5 Max ine-hardware efanayo ne-DOOGEE X5. Nge-1 GB ye-RAM kuphela kunye neprosesa eqhelekileyo, singasebenzisa ifowuni ngokulula ukukhangela iinethiwekhi zentlalo, i-Intanethi okanye sisebenzise iinkonzo zokuthumela imiyalezo kwangoko. Kodwa, nangona sinokudlala imidlalo elula kakhulu, kunye noqwalaselo olu silibale malunga neninzi yemidlalo ekhoyo kwivenkile yesicelo sikaGoogle. Kwaye i-8 GB yayo yokugcina yangaphakathi indibetha njengelungileyo, ke Ndikhetha imodeli ye-DOOGEE X5 Pro kwi-DOOGEE X5 Max ehlawula ngaphezulu kwe-10 ye-euro. Okanye ndiziphose kwi-DOOGEE X5 Max Pro ...
Ewe kunjalo, ukuba ufuna ifowuni ye-Android enexabiso eliphantsi kunye nomfundi ofunda ngeminwe, i-DOOGEE X5 Max yeyona fowuni inexabiso eliphantsi.
I-DOOGEE X5 MAX Pro, le yeyona nguqulo ineevithamini yomgca we-DOOGEE X5
Ekugqibeleni sinayo I-DOOGEE X5 Max Pro, Eyona fowuni igqibelele kuyo yonke i-DOOGEE X5, emele iinkcukacha ezimbini, njengemodeli yesiqhelo: ibhetri yayo enamandla ye-4.000 mAh enika i-terminal ukuzimela okugqwesileyo kunye nomfundi ofaka iminwe ngasemva.
Ifowuni iyafumaneka kwiAmazon nge nqakraza apha yi 87.99 euro. Apha sele sithetha ngomehluko wee-euro ezingama-30 xa kuthelekiswa nohlobo olulula, ke kuya kufuneka uvavanye ukubaluleka kokunika inkululeko kunye nenyani yokuba iX5 Max Pro inayo umfundi weminwe.
Njengoko kulindelwe kwisiphelo esingabizi kangako, uyilo lwe-DOOGEE X5 Max Pro alubonakali ngaphandle kokhuphiswano lwalo. Ifowuni inomzimba owenziwe nge-polycarbonate enikezela ukubamba okuhle kunye nokuziva okuchanekileyo. Kuyabonakala ukuba, ngaphandle kwebhetri enkulu, i-DOOGEE X5 Max Pro inobunzima be-136 gram kuphela. Umsebenzi omkhulu ovela kwi-DOOGEE malunga noku.
Yazi, ifowuni iyatyeba kunezinye ii-XOGs ze-DOOGEE. Ubungakanani bayo be-5 mm benza le fowuni ibe sisixhobo esikhulu kunesiqhelo, kodwa icace gca ngokuzimela okubonelelwa sisiphelo sendlela, njengoko uza kubona kamva.
Iimpawu zobugcisa ze-DOOGEE X5 Max Pro
Inkqubo: Isiseko esisisiseko seMTK6737 1.3 GHz
Ikhamera esemva: 8 MP ngefleshi
Ikhamera yangaphambili: 8 MP
Ukuxhuma: I-WiFi 802.11 b / g / n, GPS, A-GPS, iBluetooth 4.0, 4G, 3G (GSM 850/900/1800/1900 MHz; WCDMA 850/1900/2100 MHz)
Ubungakanani: X x 143 73.2 10.8 mm
Ubunzima: I-135 gram
Ngokobuchwephesha siyifumana ifowuni efana kakhulu nemodeli ye-DOOGEE X5 Pro, nangona umahluko ophawulekayo. Kubaqalayo Iikhamera zingcono kodwa indawo eyomeleleyo iza nebhetri yayo ye-4.000 mAh. Kwaye ukuba i-DOOGEE X5 Max Pro inoluhlu lweentsuku ezimbini okanye ezintathu kuxhomekeke ekusebenziseni kwakho. Zimbalwa iifowuni ezinokudlula eli nani.
Eminye, njengemodeli yangaphambili, nge-DOOGEE X5 Max Pro sinokudlala imidlalo embalwa ngaphandle kweengxaki, nangona ezo zifuna umthwalo ophakamileyo womzobo ziya kusokola okanye ziyeke. Isifundi seminwe se-DOOGEE X5 Max Pro sisebenza kakuhle, into ebendingayilindelanga kwisiphelo esingabizi mali eyi-100.
Ayinakuthelekiswa nezo zeHuawei, ngeyona nto ibalaseleyo kwintengiso, kodwa ixesha lokuphendula liphantsi kakhulu, livula iscreen kuninzi lwamatyala okokuqala. Kuyinyani Ngaba kuye kwafuneka ndibeke umnwe wam izihlandlo ezininzi ukuze ndikwazi ukuqonda umkhondo wonyawo, kodwa ngokubanzi iimvakalelo bezintle kakhulu.
Su Iscreen se-5-intshi ngesisombululo se-HD iyafana nezinye iinguqulelo ze-DOOGEE X5. Inika imibala eqaqambileyo nebukhali kunye nomgangatho womfanekiso ngaphezu kokwanela ukuba nakho ukonwabela imidlalo yevidiyo okanye imixholo yemultimedia engaphezulu komgangatho owaneleyo.
Ifowuni enomdla kakhulu kodwa enexabiso eliphezulu kakhulu kunabo bakhuphisana nabo. Yeyiphi ifowuni onokuyikhetha, i-DOOGEE X5, i-DOOGEE X5 Pro, i-DOOGEE X5 Max okanye i-DOOGEE X5 Max Pro? Ndingayilahla ngokuthe ngqo iX5 Max kwaye ndigxile kwiimodeli ezimbini zePR. Ukuba ufuna ukuchitha imali encinci kangangoko kunokwenzeka, i-DOOGEE X5 Pro lukhetho olukhulu, ukuba ufuna ukuzimela ngakumbi kunye nenzwa yeminwe, i-DOOGEE X5 Max Pro yifowuni yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-DOOGEE X5, sikubonisa zonke iinkcukacha zeemodeli ezahlukeneyo
2 iiapps zokujika i-Android ibe yicomputer yakho
Oovimba be-Samsung Galaxy S8 badlula nge-30% kwezo ze-S7